नेकपा एकीकरणः एक–दुई दिनमै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी टुङ्गो लाग्दै ! – YesKathmandu.com
काठमाण्डौ । तीन महिना भित्र मातहतका कमिटी एकीकरण सक्ने उद्घोष गरेको नेकपालाई १० महिना पुरा हुँदापनि एकता सक्न कठिनाइ परेको छ । लामो समयदेखि अल्झिएको एकीकरण प्रक्रियाको बाँकी काम केही दिनमै टुंगो लगाउने गरी नेकपाको शीर्ष तहमा ‘निर्णायक’ छलफल सुरु भएको भनिए पनि शीर्ष नेताहरु अझै विस्वष्त हुन सकेका छैनन्  ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित पाँच शीर्ष नेताले केही दिनभित्रै एकीकरण टुंगो लगाउने गरी बिहीबारबाट छलफल सुरु गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा दुई अध्यक्षसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम सहभागी थिए । उनीहरूबीच झण्डै तीन घन्टा छलफल भएको थियो ।
छलफलको क्रममा पहिलो चरणमा जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सूची टुंगो लगाउन सचिवालय बैठकमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव लैजाने गरी ‘निर्णायक छलफल’ अघि बढेको नेताहरूले बताएका छन् । तर,‘एक–दुई दिनमै टुंगिन्छ कि टुंगिँदैन, भन्ने विस्वास छैन नेताहरुलाई फेरि छलफलको क्रम सुरु हुन खोजेको छ । विधि र मापदण्डका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने सोच हो भने छिट्टै टुंगिन सक्छ,’ नेता नेपालले भने, ‘ढिलाइ भो, बैठक बसेन, भेटै भएन भने त हुन सक्दैन । तर, अहिले धेरै ढिलाइ भइसकेकाले दुई दिन होइन, आमचाहना एक दिनमै होस् भन्ने छ । अहिले त्यस दिशामै छलफल अघि बढ्ने सकारात्मक संकेत देखिएको छ ।’ तर, अध्यक्ष ज्यू हरुले अल्छि गर्दिनु भयो भने कसरी टुग्निछ ?
एकीकरणको बाँकी कामसमेत टुंगो लगाउन बनेको नौ सदस्यीय कार्यदल भंग भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू छिटो एकीकरण टुंग्याउनुपर्ने दबाबमा छन् । एकीकरण अल्झिएपछि नेकपाको सांगठनिक गतिविधि ठप्प छ भने देशभरका करिब ८ लाख पार्टी सदस्य निष्क्रिय छन् । पार्टी भित्र असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् ।